Nhau - Kupatsanura uye mashandiro ezvigadzirwa zvekuchenesa hotera
Otomatiki Shoe Polisher
Marara Anogona / Waste Bin
Imba Yekuchengeta Trolley
Kuchenesa kwepurasitiki Trolley
Hofisi Yekutakura Mutoro
Mini Kushambidza Mashini
Kupatsanura uye mashandiro ezvigadzirwa zvekuchenesa hotera
Sezvo isu tese tichiziva, kushanda kwehotera hakugone kuparadzaniswa nekutsvaira, hotera yakachena uye yakasununguka inonyanya kukodzera kufamba pamba, ichipa vanhu mafaro anonakidza. Ikozvino kune mamwe mahotera asina kuchena zvakakwana. Saka kuchenesa kwakakosha kwazvo kumahotera. Pakati pavo, zvigadzirwa zvekuchenesa zvinoita basa rakakura.
Zvekuchenesa muhotera zvinogona kuganhurwa muzvikamu zviviri zvezvigadzirwa, sipo uye ekuchenesa maturusi. Anochenesa mahotera anowanzo sanganisira wakisi yepasi, wakisi yepasi, wakisi yemidziyo, yekuchenesa makapeti, yekuchenesa chimbuzi, disinfectant, girazi, yekunze yekuchenesa madziro, kujekesa, mhepo freshener, degreaser, mvura yekugeza mabwe, sanitizer nemaoko, poda yekuwacha, derusting acid, yekuchenesa mukicheni uye zvimwe zvigadzirwa zvekuchenesa hotera. Ivo vanotamba akasiyana mabasa muzvinhu zvakasiyana. Maturusi ekuchenesa mahotera anonyanya kusanganisira puru yekukweva guruva, mopu, mutsvairo, foshoro yemarara, kutsvaira bhurasho, pusha mvura, tambo yeteresikopu, kuchenesa girazi sutu, bhodhoro rekusasa, tambo yekuchengetedza, bhegi reguruva, nezvimwewo. , tinoda kugona dzimwe nzira dzakarurama. Rega vashandi vashandise zvinoenderana zvekuchenesa maturusi nenzira kwayo uye nemazvo.
Chekutanga pane zvese, zvakasiyana zvinhu zvinofanirwa kutora zvinoenderana yekuchenesa hotera zvekuchenesa uye kugadzirisa. Senge: zvishongo zvegirazi, zvinodikanwa kusarudza girazi rinosuka uye maturusi ekuchenesa magirazi; Stainless simbi accessories, isina simbi yekuchengetedza mumiririri; Midziyo yematanda, zvishongo zvinofanirwa kusarudza wakisi yemidziyo uye zvimwe zvekuchenesa.
Zvino, hutsanana mukamuri revaeni hunosanganisira mabhati, zvimbuzi, mabheseni, makapu, machira ekurara zvichingodaro. Midziyo iyi pamwe nezvivakwa zviri kusangana nevashanyi zvinofanirwa kucheneswa, kuuraya utachiona, kutsiviwa nekuchengetwa mazuva ese mushure mekunge vashanyi vavashandisa. Nenzira chete iyi vashanyi vanogona kuvashandisa zvakanyanya kunyatso.
Chechipiri, kucheneswa kwemakamuri evaenzi kwakaoma, kusanganisira kuunganidzwa kwemachira akasviba, kuchenesa kwepasi, kuchenesa pasi, kuchengetedza marara, kugadzira mubhedha, kuchenesa chimbuzi, basa rekurara pamubhedha, nezvimwe zvakasiyana nekuchenesa pamba mazuva ese, vashandi vekuchenesa mahotera vanoda pedzisa kuchenesa mukamuri mukati menguva yakatarwa, uye simbisa basa repamusoro. Mumwaka wepamusoro wekugara kwehotera, nguva yekuchenesa yega yega kamuri ichave yekukurumidza, uye yekuwacha maficha ichave yakakwira. Naizvozvo, zvinonyanya kukosha kuti vashandi vekuchenesa vave nemota yebasa remukati ine huwandu hukuru, hwakasimba mashandiro, mwenje uye nyore.
Kuchenesa harisi rekuedza zvepamusoro chete, asi zvakare chairo basa rakanaka. Chete nekuita basa rakanaka mukuchenesa hotera ndipo patinokwanisa kurega vaenzi vachiuya vachienderera mberi. Kunyangwe chikafu chakanyanya kukosha, sevhisi yakatonyanya kukosha. Kune chirevo chekuti muyenzi ndiMwari, uye muhoro wedu unobva kwavari.
Post nguva: Jul-03-2021
ROOMI 1606, HUADING BUILDING, NO.2368 WEST, ZHONGSHAN MUGWAGWA, XUHUI DISITI, SHANGHAI CHINA
Zvinowanzovanzwa matambudziko emubhedha wehotera
Kupatsanura uye mashandiro ehotera clea ...